Digital Patrika – किन आउँदैछन् पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल ?
किन आउँदैछन् पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल ?
भ्रमणका बारेमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा भारतको शंका
Mar 05, 2018digitalpatrikaअन्तर्राष्ट्रिय समाचार, ताजा समाचार0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिन भन्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहीद खाकान अब्बासी सोमबार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको स्वागतका लागि काठमाडौंका सडकमा पाकिस्तान र नेपालका झण्डा राखेर झकिझकाउ पारिएको छ ।
नेपाल अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउन आग्रह गर्न पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आउन लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ । २०७१ मंसिर १०–११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको हात मिलाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नु भएको थियो । नेपालको त्यो नेतृत्वदायी भूमिका र मध्यस्थताकर्ताको महसुस गर्दै अब्बासी नेपाल आउन लागेको परराष्ट्रविदहरुको भनाई छ ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको जागिरका लागि गएको ९ महिनाभन्दा अघि लुम्बिनीबाट बेपत्ता भएका पाकिस्तानी सेनाका सेवानिवृत कर्णेल मोहम्मद हबीब अझैसम्म बेपत्ता छन् । पाकिस्तानले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ ले हबिबको अपहरण गरेको आरोप लगाएको छ ।
पाकिस्तानी पूर्व कर्णेल अझैसम्म बेपत्ता
कर्णेल हबिबको परिवारले यस विषयमा नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म उनको पत्तो लागेको छैन । यस विषयमा पनि अब्बासीले जिज्ञासा राख्ने अनुमान गरिएको छ ।
सार्क सक्रिय होला रु
तर भारतले पाकिस्तानमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने प्रष्ट जनाईसकेको छ । यस अवस्थमा सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमै गर्ने कि अरु देशमा गर्ने भन्ने बहस पनि एकातिर छ । यदि अर्को देशमा हुने भए अंग्रेजी अल्फाबेटका आधारमा हुने सार्ककको नियम अनुसार श्रीलंकामा हुनेछ । भारत पाकिस्तान नजाने र पाकिस्तानले अर्को देशमा नजाने अडान लिए सार्ककको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्नेछ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासी नेपालको निमन्त्रणामा नभई आफ्नै इच्छामा आउन लाग्नु भएको हो । भ्रमण टोलीमा विदेशमन्त्री खवाजा मोहम्मद असिफ, परराष्ट्र सचिव तेहिमना जान्जुआ, परराष्ट्र प्रवक्ता डा। मोहम्मद फैसललगायत एक दर्जन उच्च अधिकारी रहनेछन् ।
यसले पनि नेपाल र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध कूटनीतिक मात्रै नभएर भावनात्मक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।